The World Nepal News | यसरी नेकपा पुर्नएकिकृत हुदैछ
संसद विघटन पछि अनौपचारीकहरुमा फाटेको नेकपा के फेरी जुट्ने सम्भावना छ ? यो सबैको चासोको विषय देखिन्छ । मुख्यतयः नेकपाको एकताको सम्भावना देख्नेहरुको दुई तर्क देखिन्छ ।
पहिलो, नेकपा औपचारीकरुपमा फुटेको छैन, मन मात्र फाटीएको हो । जे जस्तो अबस्था सिर्जना भएको छ त्यो कुनै सैद्धान्तिक पनि छैन । भागबण्डाको हिसाव किताब नमिल्दा देखिएको यो तिक्तता भागबण्डामा आएर हँसोमुख हुन सक्छ ।
ओलीले धेरै ठाँउमा प्रष्ट भनेका पनि छन संसद विघटन गरेर उहाँले देखाई दिएकामात्र हुन । माधब प्रचण्डले आलीले खटाएको भाग स्वीकार गर्ने हो भने सगै बाडिचुढि खाँएर बस्न सकिने सम्भावना जाहाको तही छ । माधब प्रचण्डको स्वर पनि यो भन्दा फरक छैन, उहाँहरुले मागे जति पाएमा सँगै बस्न कुनै कठिन छैन । राजनितीक जानकारहरुले प्रष्ट बुझेका छन यो अबस्था भनेको दुबैले आप्mनो शक्तीको चरम दुरुपयोग गरेर भागबण्डाको बार्गेनिङ गरि रहेकाहुन ।
माधब प्रचण्ड समूहले एकता माहाधिबेशन सम्म सहमतीमा नै सबै पाटी तथा सरकारको काम कारबाही अगाडि लाने सहमतीलाई त्यागी ओली समूहलाई पाटीबाट हुर्मत हार्ने किसिमले अविश्वासको प्रस्ताब देखी राष्ट्रपति समेतलाई खूइल्याउने जुन तिक्डम गरे यो पाटीमा उहाँहरुको टेक्निकल्ली बनेको बहुमतको चरम दुरुपयोग थियो ।
प्रचण्ड माधबको यो तिक्डमलाई छेक्ने ढाल प्रधानमन्त्री ओली समूहले पनि आफ्नै पाटी पक्तीसँग फेस नगरी संविधानमै नभएको प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकारको नाममा संसद विघटन गरे, यो नै आफ्नो स्वार्थ रक्षाको एकमात्र उपाय थियो । उहाँले आफु बस्न नपाउने भए कुर्सी नै भाँचिदिने त पहिल्यै भनेकै थिए, भाँचे पनि, यो ओली पक्षको सत्ता र शक्तीको चरम दुरुपयोग थियो ।
यी सबै घटनाक्रमहरु पाटी फुटाउनु भन्दा पनि एकले अर्कोलाई तर्साएर, थर्काएर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न तर्फ उन्मुख थियो र छ पनि । यसको उदाहरण उनीहरुले अहिले सम्म पाटी फुटेको दावी निर्बाचन आयोगमा नगर्नु हो । दुबै एकले अर्कोलाई पाटी फुटाएको आरोप लगाउनको लागी पर्ख र हेरको अबस्थामा रहेकाछन ।
नेकपाको दुबै पक्षले प्रष्ट बुझेका छ, यो हविगतमा आम जनतामा कुन मुख लिएर जानु ? त्यसमा पनि चुनाबमा जानु भनेको “चोक्टा खान गएकी बुढि झोलमा डुबेर मरी” भने जस्तै हुनेछ । छदाखाँदाको दुई तिहाई नजिकको सत्ताको यो रजगद छोड्नु भन्दा सहमती हुने कुरा नहोला भन्न सक्ने अबस्था छैन ।
दोश्रो, चाइनाको जोडबल । मैले केही नेकपाका दुबै पक्षका केन्द्रिय नेताहरुसँग यस विच अनौपचारीक कुरा पनि गरिरहकेकोछु । उहाँहरु चिनको हस्तक्षेपले छिट्टै नै यो पाटी बिभाजनलाई जोगाउने कुरामा विश्वास गर्दछन । । हुन पनि चाइना जुन सुकै अबस्थामा पनि नेकपा बिभाजन नहोस् र संसदको बनावट पनि यहि अबस्थामा रहोस भन्ने नै चाहान्छ ।
चिनबाट औपचारीक तथा अनौपचारीक, हावाईमार्ग देखी सडकमार्ग सम्मबाट जसरी एक पछि अर्को चिनिया समूहहरु नेपाल ओइरिरहेकाछन यसबाट प्रष्ट हुन्छ की चिन नेकपाको एकतासँगै विद्यमान संसदको यो बनावट जोगाउन चाहान्छ।
चिन नेपालमा राजनितीक परिचालनको लागी एक बलियो र विश्वाशिलो शक्तीको खोजिमै थियो र आज पनि छ । नेकपाको यो राजनितीक बर्चश्व पछि नेकपालाई त्यस्तै शक्तीको रुपमा छानिरहरेको थियो । नेकपा भित्र पनि चिन प्रचण्ड पक्षसँग नजिक र भरपर्दो सहकार्यमा जोड दिई रहेको छ ।
यस विच चिनले पक्कै पनि ओलीलाई राजिनामा दिन र प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुटनितिीक दवाब दिएको हुनुपर्छ । यसकै परिणाम विधमान संसदको यो बनावट नचाहाने बाहिरी शक्तीले प्रधानमन्त्रीलाई उपयोग गरेकोमा शंका छैन ।
हुन पनि नेपालको राजनितीमा आन्तरिक भन्दा बाहिरी शक्तीको भुमिका बढि प्रभावकारी रहने गरेको देखिएकोछ । त्यसमा पनि नेकपाको जुटमा समेत चाइनाको बलियो सहयोग र प्रभाव थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ नै । यस परिपेक्ष्यमा चिन आफ्नो पूर्ण शक्ती, नेकपाको फाटो रोक्न लगाईरहेकोछ ।
तर नेकपाको यो फाटो पूर्णत च्यातिनेछ भन्नेहरु भने माथिको तर्कमा सहमत देखिदैन । यो फुट औपचारीक नदेखिए पनि अब जुटन नसक्ने अबस्थामा उनीहरुले एकअर्को माथि लगाएको कटु बचन र आरोपहरुले पुर्याएको र दुई समूह पुन सगै बस्न सक्ने अबस्था मेटीएको मान्छन ।
अर्को तिर कम्युनिष्टहरु फुटन, आरोप लगाउन, कटु बचन बोल्न मात्र होईन एकले अर्कोलाई मार्ने षडयन्त्र समेत गर्दा पनि स्वार्थ पुरा हुने अबस्था देश र जनताको नाममा अंगालो हाल्न रतिभर नि लाज नमान्ने इतिहास साक्षि छ । त्यसकारण पनि यो तिक्तता हिजो एकता हुनु पूर्ब पनि थियो र अहिले हुदाँ पनि केही फरक पदैन । यसकाराण पनि पुर्नएकताको सम्भावना रहेकोछ ।
त्यस्तै बामदेबको एकता अभियान रहेको र त्यसले सास हाल्ने कुरामा समेत विश्वास गर्नेहरु देखिन्छन तर बामदेबलाई बुझेकाहरुको भने यो उनको अर्को बार्गेनिङ रुपमा बुझेकाछन । यसकारण चाइनाले बामदेबलाई प्रयोग गर्न खोजे पनि यो चाइनाको लागी प्रत्युपादक देखिने र अन्तत बामदेबलाई अर्को शक्तीको रुपमा स्वीकार गर्ने कुरामा नत ओली नत प्रचण्ड समूह तयार हुने देखिन्छ । यसर्थ बामदेबको एकता कार्ड अन्तत एक उपाध्यक्षमा गएर अन्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपाको यो फाटो नजोडिने अबस्था आउदाँ पनि आन्तरिक भन्दा बाह्य हुने र त्यो शक्ती भनेको विधमान संसदको बनावट नचाहने शक्ती हुनेछ र यसमा चाइना व्याक फायर हुनेछ भन्ने तर्क पनि बलियो देखिन्छ । जुन शक्तीले झण्डै ६ महिनाको प्रयास पश्चात संसद विघटन गराउनमा दुई समूहको भागबण्डाको प्रयोग गर्यो त्यो शक्तीले एकता हुन दिदैन र नेकपाको विभाजन अपिरहार्य देख्नेहरु पनि छन । यो तर्कमा बलियो आधार भने देखिन्छ ।
मुख्यत भारत र अमेरिकन यो संसदसँग खुसी नरहेको जगजाहेर नै छ । यस यर्थाथलाई हेर्दा ओलीले बलियो साथ पाएको हुनुपर्छ । यहि स्वार्थकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षले स्पष्ट रणनिती बनाउन नसकेको पनि अनुमान गरिएको छ । यो शक्ती बलियो भएको अबस्थामा नत संसद पुर्नस्थापना न पाटी एकता दुबै नहुन सक्छ ।
तर चाइनाको नेपालको राजनितीमा सकृय हुने जुन चाहाना स्पष्ट देखियो यो विगतको अबस्था भन्दा फरक हो र हिजोको पुरातनबादी सोचबाट हामी माथि उठनु पर्ने देखिन्छ । चाईना मौन नरहेकोले नेपालको राजनितीमा जर्बजस्त हस्तक्षेप अबश्यम्भावी देखिन्छ । यो अबस्था नै हो जसले फेरी नेकपालाई कुनै न कुनै रुपमा जोड्नेछ । त्यसको लागी पनि निर्बाचन आयोगमा ढिलाई र सर्बोच्चमा समेत ढिलाई हुने देखिन्छ । यहि परिपक्कता सगै अन्तत सर्बोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्नेछ ।
यसरी पुर्नस्थापना भएमा संविधानको संबैधानिकता पनि बँच्ने, बिपक्षहरुलाई समेत उचित जबाफ हुने र अन्तत नेकपाको फाटो टालिने अबस्था देखिन्छ । आउदो बैशाखमा चुनाब भन्दा पनि नेकपाको पुर्नएकिकरण सहितको संसद स्थापना हुने कुरा बलियो देखिन्छ ।